Maitiro ekudzima Apple's Ultra Wideband uye chengetedza hupenyu hwebhatiri | IPhone nhau
Maitiro ekudzima Apple's Ultra Wideband uye chengetedza bhatiri
Apple yakaisazve Ultra Wideband (UWB) pachena, imwe tekinoroji yeBluetooth iyo yakaraswa kusvika Apple yasvika neiyo iPhone 11 ndokufunga kuikurudzira zvakare. Sezvazvinowanzoitika mune izvi zviitiko, hapana kana munhu anga atora nhoroondo yekuvanzika kwayo uye bhatiri kuchengetedza kusvikira iyo Cupertino kambani yatanga kuishandisa nekutadza. Iva sezvazvingaita, Apple's Ultra Wideband iyo inotora mukana weU1 Chip inogona kuremara uye tinokuratidza kuti ungazviita sei. Dzidziso nyowani yakapusa yatinokuunzira kubva kuActualidad iPhone kuti zvive nyore kwauri.
Chinhu chekutanga chekurangarira ndechekuti kudzima Apple's Ultra Wideband unofanirwa kuve neIOS 13.3.1 yakaiswa, sezvo iri kubva pane iyi vhezheni iyo yatinowana iyo gadziriso iyo inotibvumidza kuti tiibvise. Iri basa rinoda iyo U1 Chip iyo Apple inokwira uye inovandudza, pakati pezvimwe zvinhu, iyo AirDrop maitiro. Iko kugona kunowanikwa muiyo iPhone 11, iPhone 11 Pro uye Pro Max saka kana iwe uine yechinyakare modhi, kunyangwe ichizoita kunge yakafanana basa iwe iwe yaunogona zvakare kudzima, haina kunyatsofanana uye pamwe iyo bhatiri yekushandisa haina zvinoonekwa.
Vhura iyo Zvirongwa app pane yako iPhone
Enda kune Chakavanzika chikamu
Dzvanya pane iyo Nzvimbo basa uye kamwe mukati, enda kune kumagumo kune iyo "System Services" chikamu, pinda.
MuSystem Services tsvaga "Network yekubatanidza uye isina waya netiweki"
Iwe unozofanirwa kudzima switch kuti usiye basa racho
Kuremadza mamwe emabasa aripo muchikamu chino "System Services" anotibvumidza kuchengetedza yakawanda bhatiri, Imwe yeakanyanya kufanira kana kuita kuti ishandiswe i "Nzvimbo Dzakakosha" nekuti inochengetedza nzvimbo yedu nekumira uye inoshandisa yakawanda bhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima Apple's Ultra Wideband uye chengetedza bhatiri
Inoshamisa inosununguka uye inowedzera modhi yekunyorera kuti uwane zvakanyanya mairi
Chinja museve unofinha weGoogle Mepu yemota (TUTORIAL)